Midabka Lac Dheecaanka, Soosaarayaasha Midabka Lac Dheecaanka ah, Soosaarayaasha Midabbada Lac Dheecaanka ah, Dhoofiyeyaasha Midabbada Dheeh Lak
Bogga ugu weyn >> Midabka Cunnada Dabiiciga ah
Lac Dheeh Midab
[Ku saabsan Lac Dye]
Midabka Lak dheehu waa midabka cunnada ee dabiiciga ah ee la cuni karo lagana sifeeyay lakabka loo yaqaan "resinoid lac" ee ku milma sodium carbonate-ka biyaha, resinoid-ka lac waxaa ka soo baxa haweeneyda Laccifer locca oo ku nafaqeysa Fabaceae, dhirta Maoraceae. Waxyaabaha ay ka kooban tahay maninku waa shellac acid A, B, C iyo E.
[Dabeecad] Dheehku waa budada cas ee kadinal. In yar oo biyo ku milma., Waxaa lagu dhex miir aalkolo iyo propylene glycol, maahan saliidda cudbiga. Midabkiisu wuu ku kala duwan yahay PH v-alue. Waxay umuuqataa casaan salmon ah PH3 - PH5, cas ilaa magenta PH5-7, guduud marka PH v-alue ka weynaado 7. Way xasiloon tahay iftiinka xaalada aashitada. Ma ahan mid xasilan xaalada alkalescent, si fudud u libdhay oo ay saameeyeen ion biraha (gaar ahaan Fe2 ＋)
Cardinal cas ama Magenta Powder
Midabka v-alue E
Khasaare ku saabsan qalajinta% Kayar
Lead ppm Kayar
Arsenic ppm Kayar
Bir culus ppm Ka yar
Bakteeriyada cudurada keena
[Tixraaca Codsiga iyo Adeegsiga]
Dheeh Lak ayaa si weyn loogu isticmaali karaa cabitaanka casiirka, cabitaanka kaarboon, khamri, nacnac, macaanka iyo suugada iwm Tixraaca isticmaalka waa 0.005 ~ .05%.
Waxaa lagu buuxiyaa balaastik ama weel warqad leh baco gudaha ah, miisaanka saafiga ah waa 10kg ama 20kg. Heerarka xirmooyinka kaladuwan ayaa la heli karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Shaabadaysan, ka fogoow nalka, ku kaydi meel qabow & qalalan.
Laba sano laga bilaabo taariikhda wax soo saarka haddii xaalada keydinta ay gaarto sida kor ku xusan. Marka la furo, waa in mar labaad la xidho oo la isticmaalo lix bilood gudahood.